Devozione del giorno: la cosa da fare "la salvezza eterna" | PREGHIERA&NEWS
Nsọpụrụ ụbọchị: ihe ị ga - eme "nzọpụta ebighi ebi"
Paolo Tescione	Edere ya November 13, 2020 November 13, 2020
Nzoputa ebighi ebi bu mbu nke ahia. Na-atụgharị uche n'okwu ikpe a nke gbanwere ọtụtụ ndị mmehie ma mejuo Eluigwe na ọtụtụ puku ndị nsọ. Ozugbo mkpụrụ obi na-efu, gịnị ka akụnụba, nsọpụrụ, na ihe ụtọ dịịrị? Kedu ihe mmeri, otuto nke ụwa, sayensị, ihe efu, na oke ebumnuche ga-aba? Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ eze ma ọ bụ eze nwanyị, olee uru ọ ga-aba ma ọ bụrụ na ị daba na hel? Ọbụna ma ọ bụrụ na ihe niile efuola n’ụwa, kedụ ihe ọ pụtara ma ọ bụrụhaala na anyị azọpụta onwe anyị? Chee echiche banyere ya…
O siri ike ịzọpụta anyị. Atụla egwu n’ihi na, ọ bụrụ na o siri ike, ọ gaghị ekwe omume site n’enyemaka Chineke.Ma Jizọs sịrị: Ọnụ ụzọ ahụ dị warara, ụzọ nke na-eduga na Ndụ bụkwa ogwu na ihe siri ike, mmadụ ole na ole na-achọta ya (Matth., VII, 14) ). Amaghị m dị ka onye na-eso ụzọ m ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye na-agọnahụ onwe ya, buru obe ya soro m. - Kedu ihe ị chere? Kedu otu ị ga - esi chọta onwe gị n'etiti mmadụ ole na ole? Kedu ka ị si alụ ọgụ megide agụụ gị, kedụ ka ị ga-esi buru obe gị?
Ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha. Afọ ole na ole nke ndụ na-ekpebi mgbe ebighị ebi anyị… Lee echiche! Nyere ume ikpeazụ, eziokwu ahụ emeela. Enweghị olileanya ọzọ ịdị na-arụ ọrụ ka mma! Agaghị enwe oge na gras ọzọ iji nweta omume ọma na uru; ọnụ ụzọ nke mgbaghara adịghịzi emeghe ... Ebe osisi ahụ ga-ada, ọ ga-anọ ebe ahụ; .., ma m na-azọpụta ya na Jizọs, Meri na ndị nsọ, ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ na-ama ikpe ebighi ebi ... Ya mere, ọ bara uru ịchụ àjà ma eleghị anya ihe niile iji zọpụta gị.
OMUME. - Gụa Pater atọ n'ihu Jizọs, na-eme mkpesa na ọ chọrọ ịzọpụta gị n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla.
Nke gara aga Post Gara aga post:Tugharia uche na taa na njikere na njikere ighara itinye ndu gi kpam kpam n'aka Chineke anyi di ebere
Next Post → Post ozo:Pompeii: ha na-ezere ọkụ ekeresimesi ma nye otu narị puku euro maka ezinụlọ nwere nsogbu